Turkiga oo baxsad u ah qodista shidaalka Soomaaliya - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Turkiga oo baxsad u ah qodista shidaalka Soomaaliya
Turkiga oo baxsad u ah qodista shidaalka Soomaaliya
January 23, 2020 Duceysane494
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkiga uu soo saaridoono shidaalka xeebaha Soomaaliya kujira, kadib casuumaad uu ka helay Dalka Qaniga ah ee dhaca geeska Afrika.
Soomaaliya ayaa meel marisay sharci batroolka si ay u soo jiidato indhaha Maalgashadayaal shisheeye oo dheeraad ah oo ku soo qolqola garoomadda tamarta ee Soomaaliya, waxayna daha ka rogtey oo ay soo bandhigtey 15 Xirmooyin, Kaas oo shirkadaha shidaalka doonaya sahmintii shidaalka ee Badda ee dalka ay uu fasaxday.
Turkigu ayaa kasbaday qulubta shacabka Soomaaliya 2011, gaar ahaan tan iyo markii ay bilaabay inuu dalka soomaaliya siiyo gargaar bini’aadannimo si wax looga qabto dhibaatada macaluusha ee waqtiga ku dhufatay, wuxuu sidoo kale la saxiixday heshiisyo dhanka tamarta iyo kheyraadka, wadankan salida hodanka ku ah ee dhaca geeska Afrika.
Turkiga Ayaa Waxaa uu ka bilaabi doonaa baarista gaaska bariga Mediterranean sannadkan aan ku jirno, ka dib heshiis dhinaca badda ah oo uu la saxiixday Dawladda Liibiya, Sidoo kale waxaa uu xataa heshiis la galay Dalka Niger, In uu ka fuliyo howlaha Macdan baarista iyo sahmin.
“Waxaa jira in ay Soomaaliya nagu casuuntay,” ayuu yiri Erdogan Isniintii. Waxaay dhaheen: saliid baa ku jirta badahayaga. Hawlgallo sahmin Macdan ah ayaad ka wadaan Liibiya, laakiin sidoo kale ma ogtihiin, waad ka sameyn kartaan halkan. ‘Tani waa mid aad nogu muhiim ah. “Sidaad la socotiinba Injineerada Turkiga ayaa ka qeyb qadanaya dhismaha howlaha kaabayaasha dhaqale ee Soomaaliya.
Balse nasiib daro qandaraaslayaasha ayaa waxaa bartilmaameedsado kooxaha argagixisada oo uu arka cadow dalkooda ku soo duulay.
Ciidamada maxalliga ee Amniga ee soomaaliya ayaa waxaa tababara saraakiil Turki ah oo kusugan saldhig militari oo uu Turkigu ka dhisay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Ibrahim Nassir, oo ah kalkaaliye cilmi-baare ka ah Xarunta Dhibaatooyinka iyo Daraasaadka Siyaasadda ee ankara (Ankasam) ayaa sheegay in lagu Casuumo Turkiga Sahmiinta Shidaalka Soomaaliya in ay tahay mid ay ugu abaal gudeyso Xukumadda Soomaaliya howlaha dib u dhiska iyo gargaarka bini’aadannimo ee ay turkigu siyaan soomaaliya.
Laakiin wuxuu kaloo soo jeediyay in Soomaaliya laga yaabo inay u adeegsato Turkiga is-barbar-dhig ama tartarsiin ka dhan ah kuwa ay gobolka ku xafiiltamayaan turkiga.
“Muranka ka taagan dhul badeedka Badweynta Hindiya ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya waa mid qatartiisa leh dhanka amaanka inta lagu gudajiro howlaha Baarista iyo sahminta shidaalka, waxaana laga yaabaa in kooxaha hubaysan qaarkood loo adeegsado sii looga hortago in Ankara ay sii waddo ka faa’ideysiga batroolka soomaaliya,” ayuu u sheegay Arab News falanqeeyaha.
Jędrzej Czerep, oo ah falanqeeye rug-cadaa oo ka tirsan Machadka Polish ee Arimaha Caalamiga, ayaa sheegay in soo saarista shidaalka Soomaaliya ee uu doonayo in uu Turkiga soo saaro in qaar ay uu macneysan karaan in ay tahay hanti qaran oo la xaday.
“Taasi waxaay u horseedi doontaa muwaadininta reer Turki khatar weyn oo dhanka Bariga iyo Badda ah, Sidaan ka warqabno Al-Shabab ayaa haysata doonyo dheereya oo ay ku afduubi karto marakiibta Ay doonayan in ay afduubaan.
Waxay sidoo kale abuuri karta kala qeybsanaan Qurbajoogta Soomaalida ah ee ku sugan Istanbul ama xitaa xag-jiriinta dhexdooda in ay kala qeybsamaan, ”ayuu u sheegay Arab News.
Xaaladda siyaasadeed ee aan xasilloonayn ee ka jirta Soomaaliya waxaa sii hurin kara sahmintan Turkiga, sida uu sheegayo Sarkaal sare oo ka tirsan Golaha Atlanta, Mudane Charles Ellinas.
Shirka saddexaad ee iskaashiga Turkiga iyo Afrika ayaa lagu wadaa in bisha Abril lagu qabto dalka Turkiga.
Ma ahan oo keliya in muddo gaaban oo kaliya ay tahay in laga walaaco, ”ayuu u sheegay Arab News. Waa Arrin Mustaqbalka fog ah. Waxaay qaadataa qiyaas ahaan 20 sano in Dal uu ku soo celiyo maalgashiga lagu sameyey shidaalkiisa.
Muddadaasna waa in la ilaaliyaa heerka iyo xaladda iibka saliidda. Iyada oo ay arrimaha mudnanta kuwaad leh ay ka mid yihiin, aminga, siyaasad aan fadhin iyo dalka oo aan mideysneyn oo ku jira jawi siyaasadeed oo aan xasilloonayn, jahwareerka ka jira Soomaaliya oo ay hardamayaan dalal shiisheeye, Hadaba muddadaas oo kale waa macquul in soomaaliya ay ka soo kabato dhibatadda oo ay horumar ficaan ka sameyso dhanka tamarta iyo macdanta Shidaalka.
Madaxwaynayaasha puntland,jubaland iyo koonfur galbeed oo nairobi kuwada sugan
Soomaaliland oo si kulul uga jawaabtay hadalkii Gen.Guulwade
Faah Faahino kasoo baxaya weerar lagu dilay tiro Al-shabaab ah
October 19, 2019 Duceysane
Aqoon-yahan Daqarre” Qodabada Shirkii Garoowe Waa Shimbirayahow Heesa” (Dhageyso)
Alshabab oo Nin ku toogtay Fagaare ku yaal Degmada Galhareeri